Shamarran Naayijeeriyaa mana barumsaa Dabaachi irraa butaman gad dhiifaman - BBC News Afaan Oromoo
Shamarran Naayijeeriyaa mana barumsaa Dabaachi irraa butaman gad dhiifaman
Goodayyaa suuraa Namoonni Dapaachii ijoollee isaanii Guraandhala 19 butamanii turan argatan imimmaan gammachuu dhagalaasan
Shamarran naayijeeeriyaa lakkofsi isaanii 110 ta'anii fi ji'a darbe keessa hidhattootaan mana barumsaa Daapachii irraa butamanii turan gara manaatti deebi'aniiru, jechuun mootummaan hime.
Gara magaalatitti deebi'uun yoo xiqqaate shamarran 101 maatii isaanii waliin walarganiiru jechuun qondaalonni dubbatu.
Boodarra akka gabaafamettis shamarran kunneen Pirezidaant Muhaamaduu Buhaarii akka arganiif gara magaalaa gudditti Abujaatti xiyyaaraan geeffamuun isaanis beekameera.
Haa ta'u malee, giddiraa irra gaheerraa kan ka'e yoo xiqqaate shamarran shan kan du'an wayita ta'u, intalli Kiristaana taate tokko ammo achitti hambifamteetti.
Shamarran gad dhiifaman keessa tokko firoota isheetti bilbilaan akka himteetti, ijoolleen shanan du'an kunis wayita konkoolaataatti walirratti fe'amanii fudhataman dhidhitamuun ta'usaa ibsiteetti.
Anii fi shamarran biroonis gara bosonaatti bakka ''naannoon isaa cufaa ta'eetti''geeffamne. Nyaati sirritti isiniif kennamaa turee gaafii jedhuufis, nyaatasaanii ofii bilcheeffachaa akka turanis dubbateetti.
Mootummaan waa'ee du'a shamarran kanaas ta'e akkamitti dubareen 110 fudhatamanii 101 qofti akka deebi'an kan ibse hinqabu.
Naayijeeriyaan barbaacha shamarran butamanii cimsite
Gamachuu fi boqonnaa sammuu
Magaalaa Dapaachii keessatti namoonni gamachuu isaanii ibsaniiru.
Goodayyaa suuraa ijooleen durbaa butamani turan hara'a ganamaan deebifaman
Shamarree fudhataman keessa abbaa ishee tokko kan ta'e Kundilii Buukaar akka BBC'tti himeetti, hidhattootatu ganama bariidhaan koonkoolaatotaan ijoolee durbaa kanneen magaalaatti fiduun hawaasatti kennani jedha.
Qondaalonni mootummaas haragalfii guddaatu itti dhagahame. Guraandhala 19, guyyaa ijooleen kun itti butamanii eegalee qeeqa cicimaatu irra gaha jira. Kunis sababa waraanni biyyatti guyyaa tokkoon dura Dapaachii gaddhiise bahu oddeeffannoon waan jiruuf.
Haala walfakkaataan bara 2014 Chibook keessatti dubaree 276 mana baruumsaa irraa butamanii fudhatamuun isaanii ni yaadatama. Kaan wayita gad dhiifaman shamarran 100 ta'an garuu hanga yoonaatti achibuuteen isaanii hinargamne.
Wayita shamarran Dapaachii kunneen fidamanii gadlakkifaman kan argan keessa haadhaa fi abbootiin shamarree Chiibook ukkafamanii fi kan maatii warra Dapaachi jajjabeessuuf dhufan keessatti argamu.
''Bakka kana dhuufuun keenya waan biroo fide,'' jechuun haadhi hintala Chibook tokko wayita Reutersitti hinmtu, wayita ijooleen ukkaafamanii turanii fi maatiin akkasitti walitti dabalaman arguun carraa mucaa ishee yaaduun akka guddoo ishee boosisees dubbateetti.
Wayit maatii hedduun gamachuun buraaqanitti, abbaan hintala tokkoo ammoo, hidhattootaan Bokkoo Haaraam ta'u hinoolee warra jedhamuun hambifamte - sababni isaas Kiristaanummaarra gara Islaamummaatti jijjiramuu waan diddeef. Raadiyoo irratti gaafiifi deebii godhameef irratti, amantiishee ganuu waan diddeef baay'een gammada jedheera.
Akkeekkachiisa mana barnootaaf
Mootummaan akka ijoolee kana gadhifamaniif waa kennuunsaa hinoolee, jedha BBC irra kan ta'e Tomii Oladipoo.
Haa ta'u malee Ministri Oddeeffanioo fi Aaada kan ta'an Alhaajii Laay Mohaammed garu ''homtu hin kaffalamne,'' jedhu.
Itti dabaluunis Obbo Mohaammed, ijooleen kun gara hospitaalatti geefamaniiru, achittis namoota birootti utuu hinmakamiin gorsi xinsammu barbachisaa ta'e utuu mana barumsaatti hindeebi'in dura kennamaaf.
Haa ta'u malee, akka maatiin tokko BBC'tti himanitti, warri finxaaleyyiin ijoolee durbaa isaanii mana barumsaatti deebisanii yoo ergan ammas akka ukkafaman akeekkachiisuu isaanii dubbataniiru.